Ramaroson Arlette : “mila fanamboarana ny Bianco” | NewsMada
Ramaroson Arlette : “mila fanamboarana ny Bianco”
Tena rafitra manokana no ilaina hanoloana ny Birao mahaleo tena iadiana amin’ny kolikoly (Bianco), raha ny fanazavan’ny mpitsara iraisam-pirenena teo aloha sady ny filohan’ny Association Nosy Malagasy (ANM), Ramaroson Arlette, manoloana ny resabe momba ny fisian’ny raharaha kolikoly teny anivon’ny Antenimierampirenena tamin ’ny fandaniana ny lalàna mifehy fifidianana.
Mila fanamboarana ny Bianco, satria sakanana tsy hanao ny famotorana izy. “Raha ny marina, be dia be ny raharaha momba ny kolikoly tokony ho notsaraina. Ahoana izy no sakanana tsy hanao an’izany?”, hoy izy. Any Rwanda, ohatra, nisy minisitra nigadra noho ny raharaha kolikoly.
Tsy maintsy tsaraina izay manao kolikoly na manao ratsy. Tsy tsabahin’ny fanjakana ny zava-drehetra, ary misy ny tsikombakomba satria hoe namana. Tsy tokony hisy izany. Tsaraina izay manao kolikoly, ary omena fahaleovantena hanao ny asany ny mpitsara.
Takina ny fahombiazan’ny Bianco
Amin’izao raharaha kolikoly maharikoriko eny anivon’ny Antenimierampirenena izao tokoa, takina ny fahombiazan’ny Bianco, indrindra ny fitsarana misahana ny raharaha kolikoly. Anisan’ny miantoka ny ho filaminana na ny ho fikorontanan’ny firenena iray manontolo ny lalàna mifehy ny fifidianana hoe nolanina amboletra tamin’ny alalan’ny kolikoly. Tena nisy tokoa ve izany sa tsia? Mila fanadihadiana lalina sy matotra.